डाक्टरले पतिको प्रेमिकाको घरमा आगो लगाइन्, २ जनाको ज्यान गयो |
डाक्टरले पतिको प्रेमिकाको घरमा आगो लगाइन्, २ जनाको ज्यान गयो
On: २०७६ कार्तिक २२ गते, शुक्रबार, ०४:०२ बजे प्रकाशित
काठमाडौं । भारतको पाश कोलोनी सूर्या सिटीमा एक महिला डाक्टरले डाक्टर पतिकी प्रेमिकाको घरमा आगो लगाएकी छन्। महिला डाक्टर सीमा गुप्ताले घरमा आगो लगाउदा आगोमा जलेर २५ बर्षिय पतिकी प्रेमिका र उनका ६ वर्षीय छोराको मृत्यु भएको छ। युवतीलाई बचाउन खोज्दा उनका भाई घाइते भएका छन्।
सासु सुलेखासँग डाक्टर पति सुदीप गुप्ताकी प्रेमिका दीपा गुर्जरलाई धम्की दिन पुगेकी थिइन्। दुवैबीच विवाद चलिरहँदा अचानक महिला डाक्टरले आफूसँग रहेको स्प्रिटको बोतल फर्नीचरमा खन्याएर आगो लगाइदिए र बाहिरबाट ढोका थुनि दिएकी थिइन्।
ती युवती डाक्टर दम्पतीको क्लीनिकमा काम गर्थिन्। पतिसँग अफेयर रहेको थाहा पाएपछि महिला डाक्टरले उनलाई कामबाट हटाएकी थिइन्। तर डाक्टर र ती युवतीबीच भेटघाट चलिरह्यो। डाक्टरले युवतीलाई बस्न घर समेत खरिद गरेका थिए।
अन्य सम्बन्धित समाचार: कतारमा एकैदिन ५ हजारले जीते कोरोना
आगोले भयानक रुप लियो, कसैले भित्र जाने हिम्मत गर्न सकेनन्। त्यहाँ पुगेका दीपाका भाइ अनुजले घरभित्र छिर्ने प्रयास गरेका थिए। प्रहरीले डा. सुदीप, उनकी पत्नी डा. सीमा, आमा सुलेखालाई हिरासतमा लिएको छ।
२०७६ कार्तिक २२ गते, शुक्रबार, ०४:०२ बजे प्रकाशित